UniProyecta - Fanabeazana ho an'ny sokajin-taona rehetra
Ny isa amin'ny teny frantsay
Ireo isa amin'ny teny anglisy
Ny isa amin'ny teny sinoa
Ireo boky ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Testamenta Vaovao
Salama ry mpamaky malala, miarahaba anao izahay UniProyecta. Eto isika no mieritreritra an'izany ny fampianarana sy ny kolontsaina dia tokony ho maimaimpoana ho an'ny rehetra, lehilahy na vehivavy, zaza na olon-dehibe. Noho izany, amin'ity pejy ity dia ho hitanao ny fahalalana fa izahay dia manangona amin'ny endrika lahatsoratra hanampy anao amin'ny fampiofanana. Raha tsy azonao antoka ny fomba hahitana izay tadiavinao, dia hanampy anao izahay amin'ny famintinana fohy ny zavatra ho hitanao amin'ity tranonkala ity.
Ny iray amin'ireo tanjakay dia ny teny frantsay, izay nianaranay noho ny boky sy ny dia Frantsa sy Kanada. Amin'ity fizarana ity dia mampianatra lesona ho an'ny ambaratonga rehetra isika: manomboka amin'ny vao manomboka ka hatramin'ny mandroso indrindra.
Ny volana amin'ny taona amin'ny teny frantsay
Fampitandremana frantsay: inona avy ireo?
Ny ora amin'ny teny frantsay: ahoana no ilazanao azy ireo?
Isa frantsay hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 1000
Verba frantsay: lisitra, fanazaran-tena ary fampifangaroana
Fifandraisana frantsay: lisitra sy ohatra
Ny abidia frantsay sy ny fanononana azy
Tsy azo atao izao ny tsy mila fahalalana amin'ny teny Anglisy. Ao amin'ny fahitalavitra, tambajotra sosialy ary lalao video hahita fizarana na teny nalaina tamin'ny anglisy ianao. Noho izany dia nomaninay ireto lahatsoratra ireto learn english ary manatsara ny haavonao.
Ny loko amin'ny teny anglisy
Ny andro amin'ny herinandro amin'ny teny anglisy
Andian-teny amin'ny fitiavana amin'ny teny anglisy
Ny volana amin'ny taona amin'ny teny anglisy
Prepositions amin'ny teny anglisy
Isa anglisy hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 1000
Vowels amin'ny teny anglisy: Phonetics sy fanononana
Ireo matoanteny amin'ny teny anglisy
Mpamaritra anarana mamaritra ny olona amin'ny teny Anglisy
Mazava ho azy fa tsy izy rehetra dia anglisy na frantsay, misy fiteny maro hafa tena tsara sy ilaina ianarana. Rosiana, sinoa, japoney na italiana dia ohatra vitsivitsy monja amin'ny zavatra nomaninay.
Isa alemana hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 1000
Isa arabo hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 1000
Isa amin'ny Basque manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 100
Kaody Katalana: lisitra sy fampifangaroana
Ny volana tao Basque
Mpifandray alemanina: lisitra sy ohatra
Mpisolo anarana amin'ny teny Portiogey: fanononana sy ohatra
Rosiana isa sy fanononana
Isa sinoa manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 100
Isa amin'ny teny portogey manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 100
Isa Japoney 1 ka hatramin'ny 50
Isa italianina 1 ka hatramin'ny 100
Hitodika any amin'ny sehatry ny kolontsaina isika izao, ary hijery manokana ny niandohan'ny razambenay, Gresy. Tsy misy tsara noho ny tantara andriamanitra sy mpiady tsara hanadio ny saina sy hianarantsika amin'ireo razambentsika.
Ny Angano Hercules
Ny angano an'i Achilles sy ny voditongony
Ny angano Pegasus
Ny angano an'i Prometheus sy Pandora
Ny angano momba ny telefaona
Ny angano an'i Orpheus
Ny sabatr'i Damocles
Ny angano an'i Oedipus
Angano Greek ho an'ny ankizy
Ary farany, amin'ity sokajy ity dia ampidirinay izay rehetra tsy misy toerana amin'ny faritra manokana kokoa.
Ny angano an'i Odin
Isa voalohany hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 10.000
Isa Egyptianina 1 ka hatramin'ny 100
Ny tanàna 15 be mponina indrindra ao Espana
Vavaka ho an'ny malalany efa lasa
Isa romana hatramin'ny 1 ka hatramin'ny 1000
Laharana miaramila amerikana
Isa Maya avy amin'ny 1 ka hatramin'ny 1000
Isa ka hatramin'ny 1 ny Aymara
Ny Guarani dia 1 ka hatramin'ny 100
Ary izay ihany! Manantena izahay fa mankafy ny fijanonanao any UniProyecta Ary tadidio fa raha manana fanontaniana na olana ianao dia afaka mifandray aminay amin'ny fampiasana ny forme contact na amin'ny faritra misy hevitra ao amin'ny faran'ny lesona tsirairay. Miarahaba anao, mpiserasera!
UniProyecta dia anao zoro kolontsaina sy fanabeazana maimaim-poana amin'ny internet. Mianara fiteny ary omeo fahafaham-po ny fahaliananao amin'ny lahatsoratrao sy lesona.